Kyoto University - Fianarana in Japana. Higher Education an-tany hafa.
Firenena : Japana
City : Sakyo-ku
Créé : 1897
mpianatra (eo ho eo.) : 23000
Aza adino ny discuss Kyoto University
Koa satria ny fototra amin'ny 1897, Kyoto University dia niasa mba hanana ny fahalalahana akademika eo ambany toe-tsaina ny fizakan-tena sy ny tena fanajana, ary hanokatra ny faravodilanitra vaovao amin'ny famoronana manam-pahaizana ezaka. Ny anjerimanontolo ihany koa nitady handray anjara amin'ny fiaraha-miaina am-pilaminana manerana ny fiaraha-monina maneran-.
Ny izao tontolo izao amin'izao fotoana izao miatrika maro haingana ny fiovana izay mety ho takatry ny saina ao amin'ny taonjato faha-20. Ny rafitra ady maneran-, izay antenaina mba ho tapa-kevitra tamin'ny faran'ny Ady Mangatsiaka, dia tena mitombo ao na fahasarotana sy ny heriny ho toy ny vokatry ny adim-poko sy ara-pivavahana ny fihenjanana. Mandritra izany fotoana izany, ny dian'ny eran-tontolo iainana accelerates, lehibe mbola tsy nisy toy loza sy mahafaty areti-mifindra hitondra faharavàna manerana izao tontolo izao, ary ny ara-bola krizy mihorohoro-pirenena na toekarena sy ny fiainantsika manokana ny tena fototra. Oniversite Mila mieritreritra lalina momba izay mijoro ho amin'ny Misafotofoto aza ny Fiainana. Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta Japoney dia miara-miasa amin'ny oniversite sy ny orinasa mba hampiroboroboana ny fambolena maneran-olombelona Renivohitra, ary miantso amin'ny oniversite hampiharana fanavaozana natao hitaiza ny fifaninanana iraisam-pirenena. Kyoto University izao mila mamantatra ny fomba tsara indrindra hamaliana ny ny fitakian 'ny governemanta sy ny fiaraha-monina midadasika kokoa raha mitoetra ho mahatoky ny nanorenana fanahy.
Ny telo fototra iraka avy amin'ny oniversite dia ny fianarana, fikarohana, ary ny ara-tsosialy anjara. Roa amin'ireo, fikarohana sy ny fanomezana ara-tsosialy, dia mahay hiova ho setrin'ny fironana manerantany. fanabeazana, na izany aza, manana toetra manan-danja izay Mino aho fa ho miova. In-dalana, sy ny fanoloran-tsy miankina fianarana, Kyoto University maintsy miaro hatrany ny toerana maha dia natanjaka be ny fahalalahana akademika, kely tafasaraka tanteraka amin'ny fiaraha-monina ankapobeny sy unconstrained ny fivoriambe. Mba hanao izany, ny anjerimanontolo dia tsy maintsy ho toerana akademika ezaka afaka mivoaka tony, raha manome varavarankely koa ho amin'izao tontolo izao sy ny fiaraha-monina. Ireo varavarankely azo misokatra amin'ny sampam-pianarana mpikambana fitaovana tamin'ny lelan fanapahana-fahalalana ny izao tontolo izao sy ny fiaraha-monina, izay mamitsaka any an-dafin'i, fa ny anjara asa manan-danja indrindra eo amin'ny anjerimanontolo no nilalao ny mpianatra izay sahy ivelan'ny varavarankely. Tsy maintsy miasa amim-pitandremana miaraka amin'ny mpiara-miasa eo amin'ny orinasa sy governemanta mba hanome varavarankely izay mamela ireo mpianatra mba hanao ny tsara indrindra azo ampiharina fampiasana ny fahaiza-manao izy ireo no nanjary ao amin'ny Oniversiten'i.
Maro ny fiovana no mandeha amin'izao fotoana izao eo amin'ny ara-bola raharaha ny oniversite, ao anatin'izany ny fihenan'ny amin'ny ankapobeny miasa famatsiana ara-bola sy ny fitomboan'ny fanamafisana ny fifaninanana famatsiam-bola. Dia nanjary dehibe ho antsika ny hiarovana amin 'ny vola mba manatanteraka fanatsarana ny fanabeazana tontolo iainana. Mino aho fa tsy maintsy manao ny raharaha ny fiaraha-monina midadasika kokoa momba ny ilaina ny fanatsarana ireo, amin'ny fanantenana ny hahazo fanampiana avy amin'ny malala-tanana ny raharaham-barotra izay hanantena be ny Kyoto University, ary avy amin 'ny Alumni. Izaho koa Manantena fanorenana mafy orina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fiaraha-monina eo an-toerana, maximizing ny soa ny toerana tao Kyoto-izao tontolo izao-malaza renivohitry ny Japoney kolontsaina-ary miara-miasa amin'ny oniversite hafa mba hampitombo ny tanàna mihitsy ho manan-karena sy ny isan-karazany toeram-pianarana akademika. koa, raha tiantsika ny hahomby eo amin'ny sampam-pianarana hisarihana niavaka sy ny mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo manerana izao tontolo izao, tokony hanana fandaharam-pianarana tany am-boalohany no mpiray tetikasa fikarohana izay pelatànana amin'ny Kyoto ny manintona, ary ampahafantaro sehatra iraisam-pirenena. Matoky aho fa ho anjara ireo ezaka be dia be ho any amin'ny fampandrosoana ny faritra, ary ny ho avy ny Japana sy izao tontolo izao iray manontolo.
Amin'ny maha-feno, fikarohana-miompana andrim-panjakana, Kyoto University dia tsy maintsy mampiditra ny liberaly zavakanto sy ny fanabeazana fototra, undergraduate manokana fanabeazana, ary nahazo mari-pahaizana fandaharanasa fanabeazana amin'ny fomba izay hampitaovana ireo mpianatra amin'ny famoronana sy azo ampiharina fahaizany. Mba hanaovana izany dia mitaky ny fampandrosoana ny fampianarana lalana manolotra ny ambaratongam-pitondrana samihafa fandaharana ny famaizana fahalalana sy fanamoràna maro samihafa ny fianarana safidy. Mitaky fotoana ny mpianatra mba hahatakatra ny fahaizany araka izay fara heriko. Manantena aho fa afaka manome fianarana manohana ny tontolo iainana izay mpianatra tsy Nirohotra ho mandray fanapahan-kevitra momba ny ho avy, ary fa afaka manaraka ny dingana tsara amin'ny fitsapana sy ny fahadisoana izay hahatonga azy ireo mba ho matoky kokoa any amin'ny hoavy izay izy ireo amin'ny farany misafidy.
Mba hanana be inventive mpianatra amin'ny fahaiza-manao, ny sampam-pianarana sy ny fitantanana mpiasa dia tsy maintsy nanao ny mikatsaka fikarohana sy ny fandraisana anjara ara-tsosialy fandraisana an-tanana izay mahasarika ny saina iraisam-pirenena. Kyoto University manana 10 fahaizanareo, 18 nahazo diplaoma sekoly, 14 fikarohana Institiota (mihoatra noho ny oniversite any Japana), ary ny maro hafa fampianarana sy ny fikarohana trano. Izaho no manao ny rehetra azonao atao mba hahazoana antoka fa ny tanjona dia mandroso manerana rehetra ireo sampana samihafa ao amin'ny oniversite fiaraha-monina.
Faculty ny taratasy
Faculty ny Medicine
Faculty ny fanafody Sciences
Faculty ny Engineering
nahazo diplaoma sekoly
Graduate School ny Taratasy
Graduate School ny Lalàna
Graduate School ny Toekarena
Nahazo diplaoma School ny Science
Graduate School of fanafody Sciences
Nahazo diplaoma ny Engineering School
The forerunner of the Kyoto University was the Chemistry School founded in Osaka in 1869, izay, despite its name, taught physics as well. Taty aoriana, ny Third Higher School was established in the place ofSeimi-kyoku in 1886, it then transferred to the university’s present main campus in the same year.
Taorian'ny ady lehibe faharoa, the current Kyoto University was established by merging the imperial university and the Third Higher School, which assumed the duty of teaching liberal arts as the Faculty of Liberal Arts. The faculty was dissolved with the foundation of the Faculty of Integrated Human Studies in 1992.
Ianao ve mila discuss Kyoto University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Other anjerimanontolo in Japana
Tokyo University Medical sy Dental Tokyo
Tokyo Sekoly Momba ny Teknolojia Tokyo